Tao anatin’izany dia mponina miisa 77 no tsy manan-kialofana, izay ahitana mpianatra sy vehivavy bevohoka. Tsy nijery fotsiny ny fahavoazana nahazo ny mponina ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa avy hatrany dia naniraka ireo mpiara-miasa aminy ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana hijery akaiky ireo traboina sy hitondra fanampiana ho azy ireo ka ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna Olivier Randrianarisoa no nisolotena azy, izay notronin’ny delegen’ny boriborintany faha-3 Hery Razafitsalama, ny tale kabinetran’ny CUA Ranjakasoa Mparany Gabhy. Nisy ny fanomezana kojakojan-dakozia ireo traboina mba hanamaivana ny fahasahiranana mahazo azy ireo. Teo ihany koa ny fitsinjovana ireo ankizy mpianatra izay miisa 17 ka notolorana fitaovam-pianarana izy ireo. Ireo vehivavy bevohoka miisa 3 kosa dia hisy ny mpitsabo hijery manokana azy ireo. Ankoatra izay, hisy ny fanampian’ny CUA ireo traboina amin’ny fanomezana azy ireo fitaovana hanaovana fanadiovana sy fidiovana ao an-toerana. Nanafatra mafy an’ireo traboina ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna Olivier mba ho mailo hatrany amin’ny resaka afo satria zavatra kely foana dia mety hampidi-doza.